Imizobo yeoyile ka-Ángel Villanueva 'ezinzulwini zobusuku eParis' | I-Creativos ekwi-Intanethi
Ukuba ndithe lo mfanekiso ndiwuthathe kwikhamera yam kwaye ndigqithile kwisihluzi ukuze ndifumane eso siphumo, ngokuqinisekileyo baninzi abaza kudlula bengaqondi ukuba injalo yenziwe ngeoyile kwinqanawa ngesandla segcisa elinobuchule obukhulu.
Ngu-lngel Villanueva ngubani isisa kobo busuku bemilingo eParis apho umbala obomvu uthatha eyona ndima iphambili kwaye apho, ngenxa yethoni yayo, kunzima ukufumana umahluko ukuqonda ukuba sisebenza ngomzobo owenziwe ngeenkcukacha ezinkulu.
UVillanueva usibonisa ukuba, nge ubuchule obukhulu kunye nomonde owaneleyo, unokufumana imisebenzi ekumgangatho ophezulu yemifanekiso efana naleyo ethatha inqanaba lesiseko kumfanekiso wentloko. Ipeyinti yeoyile esiyifumanayo xa simisa kwiinkcukacha zendoda ebekwe kwicala lasekunene lomzobo, okanye loo mithi apho kukho ezinye iinkcukacha ezingafikeleliyo kwinyani njengoko zisenza embindini womsebenzi.
Kukuzo zibonakalisi kunye ukusetyenziswa kokukhanya kwibhulorho apho sajonga khona okokuqala ukuba simangaliswe kukuzonwabisa okumangalisayo okwenziwa sisandla salo mzobi. Emva koko sidlula ngaphambi komoya oqokelelweyo osisa ngqo kobo busuku bemilingo eParis apho ukuthanda ezothando kuthatha indawo kunye nexesha kwizitrato zayo.
Umzobi oqhubeka nokuphonononga iinjongo zakhe nakwiwebhusayithi yakhe unokubona inxalenye yomsebenzi wakhe. Chukumisa ubuchule obahlukeneyo kunye namasebe obugcisa anjengokufota, uyilo okanye ukubhala ukufumana i Umzobi ophume izandla ukukhangela zonke iintlobo zamabinzana ukubonisa ubugcisa bakhe.
Siya noJeremy Mann ukufumana olunye uhlobo lweoyile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » 'Ezinzulwini zobusuku eParis' kwioyile ngu-Ángel Villanueva